नेवारी संस्कृति संरक्षणमा डा. राजन भट्टराई र शाक्यको प्रतिबद्धता « Pariwartan Khabar
नेवारी संस्कृति संरक्षणमा डा. राजन भट्टराई र शाक्यको प्रतिबद्धता
४ आश्विन २०७६, शनिबार १८:१९
०३ असोज २०७६, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपत्यका समन्वय कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले देश विकासको सँगसँगै साँस्कृतिक सम्पदाको जगेर्णा र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्न काठमाडौं क्षेत्र नं. ८ ‘क’ का प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्यद्वारा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटबाट विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ नेवारी समुदायमा लोकप्रिय ४ वटा बाजा संरक्षण समूहलाई नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गरेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्न महानगर लागि परेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख शिवसुन्दर बैद्यले प्रादेशीक र स्थानीय सरकारले संस्कृति संरक्षणमा ध्यान दिएको प्रति खुशी ब्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै किरण मानन्धरले नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकास र संस्कृति संरक्षणमा लागेकोमा खुशी ब्यक्त गरे । संस्कृति अभियन्ता सुजन बिलास बज्राचार्यले संचालन गरेको कार्यक्रममा नेवारी बाजागाजाका गुरुहरुलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
कांग्रेस लिमुवान परित्याग गरि नेकपामा प्रवेस गर्नेको ओइरो
‘निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बिचको खाडल पुर्नुपर्छ ‘ : डा. राजन भट्टराई
थप १ हजार २०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कुलमानका समर्थकलाई कुटेको घटनाबारे छानबिन गरिदैँ
एकसाथ चार पार्क बनाउँदै ललितपुर महानगर
[email protected], [email protected]pariwartankhabar.com